2020 Ny lehibentsika dia niarahaba ny zazakely fahatelo, zazalahy mahafatifaty, arahaba tsara !!!
2019 Nifindra tany amin'ny zavamaniry vaovao izahay.
Ny fampirantiana ny fitaovana fitsaboana iraisam-pirenena China (CMEF) faha-83
CMEF dia natsangana tamin'ny 1979 ary natao indroa isan-taona. Taorian'ny fanavaozana sy fampandrosoana nandritry ny 40 taona mahery, CMEF dia nanjary sehatra iraisam-pirenena momba ny serivisy fanatontoloana ho an'ny fitsaboana. Isan-taona, ny CMEF dia manintona mpamokatra marika 7000 +, mpitarika 600+ ary entrepre ...Hamaky bebe kokoa »
Ny sehatry ny zava-mahadomelina AI + dia nanangona $ 4,5 miliara mahery
Ny indostrian'ny fanafody dia indostrialy somary mihidy hatrany. Ny indostrian'ny fanafody dia tafasaraka amin'izao tontolo izao hatrany amin'ny fahalalana sarotra sy tsy zaraina momba ny fivarotam-panafody. Ankehitriny dia rava ilay rindrina noho ny teknolojia niomerika.Hamaky bebe kokoa »
Ny vinavinan'ny famatsiam-bola sy ny fandalinana fironana amin'ny indostrian'ny angona angovo lehibe amin'ny taona 2020
Miaraka amin'ny fivoaran'ny Internet eo amin'ny tsena manerantany dia mipoitra amin'ny fotoana manan-tantara ny angona lehibe. Nandritra ny drafitra dimy taona faha-13, dia nanao ezaka lehibe i Shina tamin'ny fampiroboroboana ny indostria “Internet +”. Eo ambanin'izany sehatra izany dia mivoatra haingana ny angon-drakitra goavambe an'i Shina ...Hamaky bebe kokoa »